Gabar soomaali ah oo meeydkeeda laga helay tuullo ku taala xadka Bulgaariya la wadaago Turkiga | Somaliska
Gabar soomaali ah oo meeydkeeda laga helay tuullo ku taala xadka Bulgaariya la wadaago Turkiga
Warside elektroonig ah oo ka soo baxa dalka Bulgaariya ayaa qoray in gabar soomaali ah meeydkeeda laga helay tuullo lugu Magacaabo Ravadinovo, Tuuladan oo ah tuullo ku taala xadka Bulgaariya la wadaago wadanka Turkiga.
Gabadhan soomaalida ah ayaa u dhimatay qabowga iyo cimiladda daran ee halkaasi ka jira xilli ay isku dayeeysay ineey u soo gudabto Yurubta bari kana soo taloowday wadanka Turkiga. Mid ka mid ah qaxootigii ay gabadhan wada tahriibayeen oo iskugu jiray soomaali, bakaastiniyiin iyo afgaanistaaniyiin ay sheegay in gabadhaasi ka soo tageen ka dib markii ay awoodi weeysay ineey socoto. Sidoo kale wiil soomaali oo muhaajiriintaas ka mid ah ayaa isagan lugu hayaa isbitaal ku yaala tuuladaasi oo qaboow xun galay.
Waa markii ugu horeeysay ee qof soomaali ah qabow ugu dhinto mid ka mid ah wadamada ku yaala Yurubta Bari. Qaxootiga soomaaliyeed ee dalkooda ka soo cararay sababo amaamn darro iyo xasilooni siyaasadeed, ayaa siyaalo badan ugu dhinta dhulka dheer ee badaha iyo buuraha halista ah ee ay tahriibka ku soo maraan kala kulaan nolol qalifsan iyo geeri. Yurubta Bari dalalka ku yaala ayaa ah meelo ay dhibaatooyin gaar ah kala kulmaan soomaalida soo tahriibeeysa, maxaa yeelay waxaa ku badan kooxaha madax faquuqa qaba ee cunsuriyiinta ah. Waana dalal ay weli ku dambeeyaan nidaamkii shuuciga ahaa ee Midowgii Soofiyeeti.
Wasiirka Socdaalka: Kuma talo jiro in Soomaalidu baasaboorka ku qaadato 5 sano
DEG DEG: Sweden soo si rasmi ah u joojisay qaxootiga Soomaalida
“Qurba-joogtu waa xaasidiin oo tahriibka iyo nolosha Yurub runta kama sheegaan”